स्थानीय तह निर्वाचन एमालेका ३३ हजार उम्मेदवार, कांग्रेसका कति ? - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
स्थानीय तह निर्वाचन एमालेका ३३ हजार उम्मेदवार, कांग्रेसका कति ?
१४ बैशाख २०७९, बुधबार १७:१५
काठमाडौं – आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै पदमा उम्मेदवारी दिएको छ । नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा गरी एमालेका करिब ३३ हजार जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका ३१ हजार, नेकपा माओवादी केन्द्रका २२ हजार, राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवार १२–१२ हजार र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ११ हजार जनाले उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगको विवरण अनुसार, नेकपा एमालेले ७५३ स्थनीय तहमध्ये ७३६ वटाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छ भने १७ वटाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसले ७५३ मध्ये ६४६ स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छ । उसले १०७ स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन । यो निर्वाचनमा कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेको छ ।
उपाध्यक्ष र उपप्रमुख
एमालेले स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ७५३ मध्ये ७३० वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएको छ । उसले २३ वटा पालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा उम्मेदारी दिएको छैन । यस्तै कांग्रेसले ५७० वटाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छ । उसले १८३ वटामा उम्मेदवारी दिएन । एमाले र कांग्रेसपछि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा धेरै उम्मेदवारी दिने दलमा क्रमशः माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी रहेका छन् ।